घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू रियन ब्रेउस्टर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो रियन ब्रेउस्टर जीवनीले तपाईंलाई आफ्नो बाल्यावस्थाको कथा, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुनु, नेट वर्थ, जीवनशैली र व्यक्तिगत जीवनको तथ्य बताउँछ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो रियन ब्रेउस्टरको जीवन कहानीको ब्यबहारिक कथा हो, जुन शुरुआती दिनदेखि लिएर उनी प्रख्यात भए। उनको बायो को संक्षिप्त चित्र सारांश हेर्नुहोस्।
हो, तपाईं सायद उसलाई एक पटकको रूपमा चिन्नुहुन्छ लिभरपूल आश्चर्यचकित। थप रूपमा, धेरै फुटबल प्रेमीहरू उहाँ एक रचनात्मक प्राकृतिक गोल स्कोरर हो भनेर स्वीकार्छन्। यी प्रशंसकहरूको बावजुद, केवल केही प्रशंसकहरूलाई रायन ब्रेउस्टरको बायोको बारेमा थाहा छ, जुन चाखलाग्दो छ। ढिलाइ नगरी, सुरु गरौं।
रियन ब्रेउस्टर बाल्यकाल कहानी:
जीवनी शुरुवातकर्ताहरूको लागि, उनको उपनाम "डक ब्रू" हो। रायन जोएल ब्रेउस्टर अप्रिल २००० को पहिलो दिन उनका आमा हुल्या हसन र बुबा इयान ब्रेउस्टरको जन्म दगेनहम, इ England्गल्यान्डको चाडवेल हेथको उपनगरीय क्षेत्रमा भएको थियो।
जवान र्यान ब्रेउस्टर एक बहिनी जेलिससँगसँगै हुर्किन। ऊ दुई वर्षको मात्र थियो जब उसले आफ्नो बुबाले सेमी प्रो प्रो फुटबल गोलकीपरको रूपमा हेरेपछि फुटबल खेल्न शुरू गर्यो। उनले एकपटक स्पोर्टजलाई भने कि:
“मेरो बुबाले मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि बच्चा हुँदा मेरो खुशीको क्षणहरू पनि जब म बल गर्दछु, जबकि मेरी आमाले मलाई याद गर्नुहुन्छ कि मबाट फुटबल लिनु भनेको कुनै डरलाग्दो सपना हो किनभने मैले जान नदिने थिएँ।
मैले हिंड्न सिकेदेखि बुबाले उसका साथीहरूसँग खेल्नुहुन्थ्यो। पछाडि फर्केर हेर्दा, म विश्वास गर्दछु कि म केवल खेलको लागि एक मायाले बनेको छु। "
यहाँ जवान Rhian Brewster संग छ स्टीवन गेरार्ड लिफ्टपूल र अप्टन पार्कमा वेस्ट ह्याम बिचको खेल हेरेपछि।
रियन ब्रेउस्टर परिवार पृष्ठभूमि:
अगाडि सुन्ने जो कोहीले आफ्नो जीवनको कथाहरू बताउँछ वा उसको बायो पढ्छन् भन्ने कुरामा सहमत हुन्छ कि उसले सहज बाल्यकाल बितायो। वास्तवमा, रायन ब्रेउस्टरका आमाबुवा मध्यमवर्गीय नागरिक थिए जसले तिनीहरूलाई र उनकी बहिनीलाई बाल्यावस्थाको सर्वश्रेष्ठ अनुभव प्रदान गर्न कुनै समस्या थिएन।
रियन ब्रेउस्टर परिवार मूल:
इ England्ल्याण्डमा जन्म भएकोमा धन्यवाद, फुटबल प्रतिभाले विश्वस्त भई ब्रिटिश नागरिक भएको दाबी गर्न सक्छ। यद्यपि हामीले उनको परिवारको उत्पत्ति निर्धारण गर्न गरेका अनुसन्धानका नतीजाहरूबाट उसले बार्बडियन, टर्की वा साइप्रियोट भनेर चिन्न सक्ने कुरा पत्ता लगाउँदछ। हो, तपाईंले सही अनुमान गर्नुभयो; उहाँ जैविक हुनुहुन्छ र यसलाई माया गर्नुहुन्छ!
रायन ब्रेउस्टर फुटबल कहानी:
तत्कालीन फुटबल उत्साही मुश्किल6बर्षको थियो जब उनले शिल्ड एकेडेमी वाईएफसीको लागि प्रतिस्पर्धी फुटबल खेल्न शुरू गरे। ब्रुस्टर7बर्षको उमेरमा, आफ्नो सीप सेट र शैलीले चेल्सी, आर्सेनल, वेस्ट ह्याम युनाइटेड र चार्ल्टन एथलेटिकको स्काउटहरूको आँखामा मनपर्‍यो। उनी चेल्सीमा सामेल भए र यसरी उनले आफ्नो क्यारियर फुटबलमा यात्रा शुरू गरे।
क्यारियर फुटबलमा प्रारम्भिक वर्षहरू:
उनले क्लबसँग years बर्ष मात्र बिताए पनि चेल्सी फोरवर्डको विकासका लागि महत्वपूर्ण थियो भन्ने तथ्यलाई इन्कार गर्न कुनै ठाउँ छैन। यो ब्लुजको साथ थियो कि ब्रेभस्टरले कोच माइकल बीएलको नेतृत्वमा उनको खेल विकास गरे किनकि उनी लिभरपूल जानु भन्दा पहिले थिए। यहाँ लिभरपूलको लागि गोल गरेको पहिलो गोल मनाउने डिक ब्र्युको विरल फोटो हो। मनपर्‍यो टोड क्यान्टवेल, ऊ आफ्नो जवानीमा उत्साहित थियो।
पढ्नुहोस् हामीसँगको सम्बन्ध छ
Rhian ब्रेउस्टर जीवनी - फेम कहानी प्रख्यात:
त्यसपश्चात १ old बर्षेले चेल्सीलाई प्रतिद्वन्द्वी लिभरपुलको लागि छोड्ने निर्णय गरेपछि उनी एडेडेमीमा चिनेका ठूला नामहरू चेल्सीको पहिलो टोलीमा प्रवेश गर्न वा बाँकी सुरक्षित पदोन्नतिमा बाँकी रहेको थाहा पाएपछि आए। उनले स्पोर्टजलाई भने कि:
“अकादमीमा केही अविश्वासी युवाहरू किन ठक्कर खाइरहेछ भनेर जान्न मैले निकै कोसिस गरें। यो पछि मलाई थाहा भयो कि उपलब्ध अवसरहरू थिएनन्, केटाहरूका लागि समेत हामीले सोचेका थियौं कि १०० प्रतिशत बढ्नेछ ”।
रियन ब्रेउस्टर जीवनी - फेम टु फेम स्टोरी:
लिभरपूलमा हुँदा, ब्रेउस्टरले स्तरमा उत्र्यो र २०१ 2016 मा उनले पहिलो टीमको शुरुवात गर्‍यो जसको बेला उनले एक्रिton्टन स्टानलेको बिरूद्ध ह्याट्रिक गरे। उनले युवा पक्षका खेलहरूमा भाग लिए र ठूला पहिलो टीम टोलीका लागि बेंचमा नामित भए, २०१ T यूईएफए च्याम्पियन्स लिग फाइनल टोटेनहम हटस्पुर बिरूद्ध।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, लिभरपूलले क्लबको पहिलो टीमसँग लिग वा टूर्नामेन्ट खेलमा कहिले पनि समावेश नगरेको तथ्य हुँदाहुँदै पनि लिभरपूलले २-० जित्यो। के उनले उल्लेख गरे कि उनले जहाँ गए पनि पदक लिए?
Rhian Brewster जीवनी तथ्या on्क मा यो लेख लेख्न को समय मा छिटो अगाडि, अगाडी शेफिल्ड युनाइटेड को लागी आफ्नो व्यापार मा छ। क्लबमा उसको आगमन स्वानसी सिटीको साथ एक प्रभावशाली loanण जादू र लिभरपूलमा सुपर प्रभावशाली फिर्ताको पछि आयो। जुनसुकै तरिकामा चीजहरू उसको लागि नयाँ क्लबमा झुकाव, बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, सधैं इतिहास हुनेछ।
रियन ब्रेउस्टर डेटि is को हो?
फुटबलप्रतिको डॉक ब्रूको अमिलो प्रेमले धेरैलाई अचम्म पार्दछ कि के उनीसँग महिलाको लागि अरु केही स्नेह छ कि छैन? यसले हामीलाई र्यान ब्रेउस्टर गर्लफ्रेंडको बारेमा अन्त्य प्रश्नहरू ल्याउँदछ। के ऊसँग वास्तवमै एक छ, वा उसले आफ्नो समय बोक्दैछ?
Lifebogger मा, हामी सचेत छौं कि अगाडि एकल छ र छोरा (हरू) वा छोरी (हरू) विवाहबाट बाहिर छ। हामीले यो चित्रण गर्ने तरिका, रायन ब्रेउस्टरको प्रेमिकाको बारेमा अन्ततः साइबरस्पेस बाढी आउनेछ जब पनि ऊ कुनै महिलाको लागि मिति रोज्छ।
रियन ब्रेउस्टर पारिवारिक जीवन:
व्यक्तिहरू को हुन् जुन डक ब्रूले धेरै मन पराउँछन् र उनीहरूको हृदयमा विशेष स्थान पाउन के गर्छन्? हामी तपाइँलाई रायन ब्रेउस्टरका आमाबुबा, भाईबहिनी र आफन्तहरूको बारेमा तथ्यहरू ल्याउँदछौं।
रायन ब्रेउस्टरको बुबाको बारेमा:
इयान फुटबल प्रतिभा को एक पिता हुनुहुन्छ। बार्बाडियन राष्ट्रियले ब्रेउस्टरको प्रारम्भिक जीवनको बखत गोलकीपरको रूपमा सेमी-प्रो फुटबल खेले र पछि फुटबल म्यानेजर बने। ब्रेवस्टरले निस्वार्थ समर्थनको लागि ईनलाई क्रेडिट दिन्छ र उसले अगाडि गरेको प्रत्येक निर्णयको साथ देखायो।
पढ्नुहोस् माइकल कार्रिक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
साथै, अगाडी याद गर्दछ कि उसको बुबा सधैं सल्लाहको लागि उपलब्ध थियो र उसलाई सुधार गर्न धक्का दिनुहोस्। यहाँ उनको ठूलो बुबा, इयान जो आफ्नो छोरा लाई मन पराउछ, संग रान ब्रीभस्टर छ काल्विन फिलिप्स, एक गैर-बिग-छह EPL क्लबबाट एक इ England्ल्यान्ड कल प्राप्त गर्दछ।
रियन ब्रेउस्टर आमाको बारेमा:
Hulya अगाडीको आमा हो। टर्की साइप्रियोटकी आमा ब्रूस्टरले सम्झन सकेदेखि नै केशमा परेको थियो। दुई छोरीकी आमाले आफ्नो छोरालाई धेरै माया गर्छिन् र उनको विकासमा बलिदानको भूमिका पनि खेल्छन्। ब्रेउस्टरले उनलाई यो सिकाउने श्रेय दिई कि उहाँ कडा मेहनत गरिरहनु भएको छ र त्यस्ता चीजहरूको सराहना गर्न सिक्नु पर्छ जुन उहाँलाई महसुस हुँदैन त्यो उत्सव मनाउन लायकको छ।
रायन ब्रेउस्टर भाई बहिनीहरूको बारेमा:
हामी सम्भवत यस अगाडिको एक्लो बहिनी, जेलिसको बारेमा कुरा गर्न छुटाउन सक्दैनौं। उनी एक मात्र भाई र बहिनी सबैभन्दा ठूलो फ्यान हुन्। उनी त्यतिबेला पनि थिइन जब ब्रुस्टरले इ England्ल्यान्डलाई स्पेनको बिरूद्ध यु १17 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेल जित्न मद्दत गर्‍यो, टूर्नामेन्ट, जसमा अगाडि सर्वाधिक गोल स्कोरकर्ताको रूपमा देखा पर्‍यो।
रियन ब्रेउस्टर आफन्तहरूको बारेमा:
अगाडिको निकट परिवारबाट टाढा, उनका पुर्खाको रेकर्डहरू छैन, विशेष गरी जब यो उहाँकी आमा र बुवा हजुरबा हजुरआमासँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै, उनका काका, काकी, काकी, भतिजा र भतिजीहरू छन् जसलाई अझै चिन्न सकेको छैन।
रायन ब्रेउस्टर को हो?…। र सबैभन्दा पहिला, त्यहाँ केहि शब्दहरू छन् जुन राम्रोसँग वर्णन गर्दछ जुन अगाडि फुटबलको बाहिर हो। सुरुमा, ब्रुस्टर एक राखिएको व्यक्ति हो जसले राम्रो हाँस्न मन पर्छ र साना केटाकेटी हुन सक्छ। ऊ नम्र पनि छ तर दृढ पनि छ। त्यसबाहेक, उहाँ केवल प्रवीण र प्रमाणिक मात्र हुनुहुन्न तर चुम्बकीय पनि हो र भेडाहरूदेखि टाढा।
जो कोही उसको कुरा सुन्दछन् त्यसले आंकडा खोज्न गाह्रो हुन्छ कि त्यो स्ट्राइकर २० वर्ष पुरानो हो वा with० वर्षको बुद्धिले बुद्धिले भरिएको छ। जब ब्रेउस्टर पिचमा हुँदैन, तपाईं उसलाई भिडियो गेमका साथ रमाईलो गर्न, यात्रा गर्न र परिवार र साथीहरूसँग गुणस्तरीय समय बिताउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो केटा पर्यटन मा पनि ठूलो हुनु पर्छ।
रियन ब्रेउस्टर लाइफस्टाइल:
कसरी स्ट्राइकर बनाउँछ र आफ्नो पैसा खर्च, २०२० मा उनको कुल सम्पत्ति $ १ लाख को अनुमान छ। हामी शर्त लगाउन सक्छौं कि वेतन र ज्यालाले उनको सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा बनाउँछ जबकि एडिडास द्वारा उनको प्रायोजनले उनलाई एक सुरक्षित वित्तीय भविष्यको लागि विश्वस्त बनाउँछ।
यद्यपि ब्रुस्टरको शेफील्डसँग सम्झौता सम्झौताको विवरण सार्वजनिक गर्न अझै बाँकी छ, क्लबमा उसको कमाई प्रति वर्ष १ 177,000,००० पाउन्डमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ जुन उनी लिभरपूलमा कमाउँथे। यसैले, यो केवल समयको कुरा हुनेछ जब युवाले बहुमूल्य प्रिमियर लिग स्टारको रूपमा आफ्नो स्थिति मिल्नको लागि विदेशी कार र महँगो घरहरू फ्लन्ट गर्न सुरू गर्दछ।
रायन ब्रेउस्टरको बारेमा तथ्यहरू:
यो आकर्षक लेख्न अप लपेट्न, यहाँ स्ट्राइकरको बारेमा अनटोल्ड वा थोरै ज्ञात तथ्यहरू छन्।
पढ्नुहोस् नेट फिलिप्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
तथ्य # १ - वेतन ब्रेकडाउन र प्रति सेकेन्डको आय:
पौंडमा आय (£)
प्रति वर्ष £ 833,280
प्रति महिना £ 69,440
प्रति हप्ता £ 16,000
प्रति दिन £ 2,286
प्रति घण्टा £ 95
प्रति हप्ता £ 1.6
प्रति सेकेन्ड £ 0.02
यो के हो रियन ब्रेउस्टरले कमाएको छ जबबाट तपाईंले उसको बायो हेर्न शुरू गर्नुभयो।
तथ्य # २ - रायन ब्रेउस्टर फिफा प्रोफाइल:
अगाडि एक शर्मनाक कम रेटिंग 70० छ। वास्तविकता प्रतिबिम्बित नगर्ने नम्बरहरूको बारेमा गुनासो गर्न उनी पुगेको हुनुपर्छ। जसरी हामी कल्पना गर्छौं ओली वाटकिन्स, हामी पनि आशावादी छौं कि ब्रेउस्टरले आफ्नो फिफा तथ्या in्कमा द्रुत बृद्धि गर्नेछ।
तथ्य # - - रायन ब्रेउस्टरको धर्म:
ब्रेवेस्टरले हामीलाई एक इसाईको रूपमा प्रहार गर्दछ, यद्यपि उनले कुनै सुझाव वा इशारा नगरेका छन। के तपाईंको फरक मत छ? तपाइँलाई कमेन्ट सेक्सनमा बताउन स्वागत छ।
तथ्य #4- अन्तर्राष्ट्रिय अभियोग:
के तपाईंलाई थाहा छ ब्रुवेस्टर countries देशहरूको लागि सुविधाको लागि योग्य छ? हो, स्ट्राइकरले इ England्ल्यान्डको युवा टीमका लागि केहि अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनहरू गरेका छन्। यद्यपि उनले आफ्नो निष्ठा तोड्न अझै बाँकी छ। तसर्थ, ऊ टर्की, साइप्रस वा बार्बाडोसको लागि देखाउन सक्छ यदि उसले चाहे।
तथ्य # - - रायन ब्रेउस्टरको ट्याटूहरू:
युवासँग ट्याटुहरूको लागि केही चीज छ। उसको देब्रे पाखुरालाई नजिकबाट हेर्दा ऊ टाटहरू भएको कुरा देखाउँछ। बॉडी आर्टमा शब्दहरू छन् जुन "तपाईंको घृणाले मलाई अस्थिर बनाउँछ"। ती शब्दहरूले संकेत गर्दछ कि स्ट्राइकरले जातीय दुव्र्यवहारले उसलाई नराम्रो मान्दैन जुन उसले अक्सर दु: ख भोग्दछ। रायन ब्रेउस्टरको ट्याटुहरू हेर्नुहोस्।
रायन ब्रेउस्टर जीवनी सारांश:
रायन जोएल ब्रेउस्टर
निक नाम कागजात पेय पदार्थ
जन्म मिति अप्रिल २००० को पहिलो दिन
जन्मस्थान इ England्ल्यान्डमा चाडवेल हेथ।
प्ले गर्दै स्ट्राइकर
आमाबाबुले Hulya (आमा) र आफ्नो बुबा, इयान (बुबा) लाई
भाई बहिनीहरू जेलिस (बहिनी)
प्रेमिका N /
बच्चाहरु N /
सोख भिडियो गेमहरूको साथ रमाईलो गर्दै, यात्रा र परिवार र साथीहरूसँग क्वालिटी समय खर्च गर्दै।
नेट मूल्य $ 1 लाख
तलब १177 पाउन्ड प्रति वर्ष
उचाइ Fe फीट, In ईन्च
र्यान ब्रेउस्टरको जीवनीमा यस विस्तृत लेखोट पढ्नका लागि धन्यबाद। हामी आशा गर्दछौं कि यसले तपाईंलाई विश्वस्त बनायो कि आजका निर्णयहरूले भविष्यका घटनाहरूको पाठ्यक्रम निश्चित गर्दछ। ब्रेवेस्टरले लिभरपुलमा सम्मिलित हुन चतुर निर्णय गरे जब उनले महसुस गरे कि चेल्सीसँगको अव्यवहार अव्यावहारिक थियो।
अधिक, लिभरपूल छोड्ने उनको निर्णय जहाँ उनी प्रतिस्पर्धाको बिरूद्ध मौका खडा गर्दैनन् मो साला, मनी र Firmino राम्रोसँग सोचिएको थियो। हामीले रायन ब्रेउस्टरका आमा बुबाआमालाई श्रेय दिनुपर्दछ कि उसले लिने हरेक निर्णयमा उसलाई समर्थन गर्छ र उसलाई सफल बनाउनको लागि जान्छ।
Lifebogger मा, हामी बचपनका कथाहरू र जीवनी डेलिभर गर्नेमा सटीकता र निष्पक्षतालाई हाम्रो वाचवर्ड बनाउँछौं। केहि पनि ठिक छैन जुन ठीक लाग्दैन? हामीलाई टिप्पणी सेक्सन मा थाहा दिनुहोस्।
लिभरपूल फुटबल डायरी
कि-जना होवर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
कर्टिस जोन्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
परिमार्जित मिति: मार्च,, २०१ 13
परिमार्जित मिति: मार्च,, २०१ 29